एक ओभरमा ६ छक्का हान्ने युवराज सिंहले लिए सन्यास | Kendrabindu Nepal Online News
11489976 535340 4448080 6506556
15784 34 9203 6547
एक ओभरमा ६ छक्का हान्ने युवराज सिंहले लिए सन्यास
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:२५
भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले सन्यास लिएका छन् । सिंहले आज पत्रकार सम्मेलन गरि सन्यास घोषणा गरेका हुन्।
सिंहले आफ्नो बाबुुको देशको लागि खेल्ने सपना पुरा गरेको साथै २५ सालको क्रिकेट करियरमा आफुले धेरै कुरा सिक्न पाए कसरि लड्ने, कसरि उठ्ने र कसरि अघि बढने भन्ने सिकेको बताए ।
भारतले दुईपटक विश्व च्याम्पियनको उपाधि जित्दा महत्वपूर्ण खेल खेलेका सिंह अलराउण्डर हुन् । उनी २०१७ देखि भारतिय टिममा चयन हुन सकेका थिएनन् । सिंहले आफ्नो करियरको अन्तिम वन डे खेल ३० जनावरि २०१७ मा वेस्ट इन्डिज बिरुद्ध एन्टिगुवामा खेलेका थिए । सिंहले २००७ को टि २० मा इंग्ल्याण्ड बिरुद्धको खेलमा एक ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए । साथै उनले १२ बलमा अर्धशतक बनाएका थिए, जुन आज सम्म पनि बिश्व किर्तिमान हो ।
उनले कुल ४० टेस्ट, ३०४ एक दिबशीय र ५८ अन्तराष्ट्रिय टि २० खेलेका छन् । उनले ३०४ वन डे खेलमा भारतको लागि ३०१खेल र एसिया एघारको लागि ३ खेल खेलेका छन् । ४० टेस्ट म्याचको ६२ इनिंगमा सिंहको नाममा १९०० रनको रेकर्ड रहेको छ जसमा ३ शतक र ११ अर्धशतकको रेकर्ड रहेको छ । यस्तै वन डे खेलमा सिंहले २७८ इनिंगमा ८७०१ रन बनाएका छन् जसमा उनले १४ शतक र ५२ अर्धशतक खेलेका छन् ।
साथै ५८ टि २० खेलमा उनले ११७७ रन बनाएका छन् जसमा ८ अर्धशतक खेलेका छन् । सिंहले टेस्टमा ९, वनडेमा १११ र टि २०मा २८ विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन् ।
Cricketer yubaraj singh
Prevनेपालकाे स्याटलाइटले एक सातापछि पृथ्वीको परिक्रमा गर्दै
अब पर्यटकहरु अन्तरिक्षमा घुम्न पाउने, एक रातकै ३५ हजार डलरNext
नेकपा फुटाउने प्रचण्डको तयारीदेखि डब्लूएचओको निर्देशनसम्म (भिडियोसहित)
पार्टी विभाजन रोक्न माग
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा फोटो पत्रकार महासंंघलाई प्रेस ज्याकेट सहयोग
सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग फस्टाउन सकेन–व्यवसायी
नेकपा बिबादलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं- कांग्रेस
२ दशकको प्रतिक्षापछि मेलम्चीको पानी परीक्षण सुरु, सुरुङ भर्न र खाली गर्न ४० दिनसम्म लाग्ने
नशालु पदार्थ खुवाइ बलात्कार, २ जना पक्राउ
कोरोना अपडेटः कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ?
सोमबारबाट बजारमा आउँने ५० रुपैयाँको नयाँ नोटमा के छ ?
हिमालयन एयरलाईन्सले कतारबाट उद्धार उडान भर्‍यो, धेरैका सपनाहरू खाडिमै रहे (फोटोफिचर)
आज काठमाडौं उपत्यकाका केहि ठाउँमा विजुली नआउने
घरबेटीहरूलाई सरकारले भन्यो- 'काठमाडौं प्रवेश गर्नेलाई कोरोना परीक्षण गर्न दवाव नदेउ'
चितुवासँग सेल्फी ! फेसबुकमा भाइरल 'आज्ञाकारी चितुवा'को वास्तविकता (फोटोफिचर/भिडियो)
पाल्पा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा काभ्रे पाँचखालका युवा पनि, मृत्तक सबैको सनाखत